Arrimo badan oo ka soo kordhay amniga caasimadda Soomaaliya - BBC News Somali
26 Febraayo 2018
Image caption Ra'isulwasaare Kheyre oo hormuud ka ah dadaalka xukuumadda ee sugista amniga
Tan iyo qaraxyadii mataanaha ahaa ee habeen dhaweyd lagu qaaday goobo muhiim ah oo ku yaala Muqdisho, ayaa waxaa aad isu soo tarayay waxyaabaha kasoo kordhaya hawlaha xasilinta caasimadda.
48-dii saac ee ugu dambeeyay, waxa socday dadaalo iyo hadalo saxaafadda loo jeedinayo, kuwaas oo mas'uuliyiin kala heer ah ay kaga hadlayeen arrimaha ammaanka.
Ugu horeyn Ra'isulwasaare Xasan Cali Kheyre oo aad uga walbahaarsan qaraxyadii dhacay ayaa ciidammo kula hadlay xarunta gaadiidka booliiska oo u dhow halkii ay wax ka dhaceen, wuxuuna yiri "Taliyeyaasha cusub,Wasiirada iyo Anaguba waxaan isku ognahay iney Arrimaha Amniga ay yihiin ahmiyada koowaad,inaan u dul qaadan doonin in dadkeenna la laayo,inaanay na niyadjabin doonin hal ama labo Qarax oo dhaco,waxaan leeyahay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir,Guddoomiye ku-xigeenadiisa iyo dhammaan Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir waa iney si waafi ah ula shaqeeyaan Taliyeyaasha ciidamada,".
Madaxweyne Farmaajo oo magacaabay ra'iisalwasaare
Meelo iyo munaasabado kala duwan, waxaa hadalo ka jeediyay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Isloow Ducaale iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan , kuwaas waxyaabo cusub sheegay.
Tusaale ahaan guddoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Yariisoow ayaa sheegay in sugista amniga caasimadda ay u diyaariyeen ciidammo gaaraya 2200 askari.
Lama oga in ciidankan uu sheegay ay yihiin kuwii xasilinta caasimadda ee horay u jiray oo maamul ahaan Banaadir la hoos geeyay iyo in ay yihiin kuwa cusub, balse waa markii ugu horeysay oo la sheego tirada ciidan hawlgal ka samaynaya Muqdisho.
Wasiir Isloow ayaa dhankiisa markale ku celiyay amar sanad ka hor soo baxay oo ahaa in hubka culus aanan lala dhexmari karin caasimadda, balse markan waxa uu amarka toos u quseeyay ciidanka militariga ee fasaxyada ama hawlaha kale uga imanaya shabeelooyinka, soona galaya caasimadda.
Si kastaba ha ahaatee , inkasta oo qaraxyada lagu baraarugay, haddane waxa ay u muuqataa in dowladda ay arrimaha ammaanka muhiimad weyn siinayso.
Tallaabooyinka la qaaday
Inkasta oo wali dhegaha dadka uu kasii guuxayo qarixii Obtoobar ee Soobe, haddane waxaa lagu doodi karaa in dadka Muqdisho ay billooyin badan ka nasteen qaraxyo iyo falal amni daro oo ay dad badan ku dhintaan.
Waxaa jira go'aamo iyo tallaabooyin hore loo qaaday iyo kuwa cusub oo loo sababayn karo isbadalka amniga ee caasimadda.
Dad badan waxa ay qaraxyada yaraaday u saariyeen waddooyinka jid-caddeyaasha ah ee lagu xiray dhagxaanta shubka ah. Taas oo balse dhanka kale dadka ay cabasho ka qabaan xayiraad kaga timid isticmaalka waddooyinkaas.
Waxaa kale oo horumar wanaagsan laga sameeyay dhanka mushaaraadka iyo nidaaminta ciidanka guud ahaan, kuwaas oo marar badan isku dhexyo dhexdooda ah ay dhibaato ka dhalan jirtay.
Ciidammada xasilinta caasimadda ayaa iyaguna la sheegay in ay shaqo wanaagsan qabteen.
Dowladda waxa ay dhawaan soo magacoowday taliyeyaasha booliiska, asluubta iyo nabad suggida oo loo kala magacaabay Bashiir Cabdi Maxamed , Bashiir Goobe iyo Xuseen Cismaan Xuseen (Sida ay isugu xigaan).
Waxyaabaha hadda cusub waxaa ka mid ah in la'isku afgartay in ciidammada AMISOM ay qeyb ka noqdaan xasilinta caasimadda sida ay tabisay warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya.
Sugista amniga Muqdisho waa tijaabada ugu weyn ee ay dowladda sanadka jirta wajahayso, kaas oo haddii ay ku guulaysato markaas ay suurtogal tahay in wax laga qabto amniga dalka intiisa kale.
Guddoomiye Yariisoow oo warbaahinta dowladda wareysi siiyay ayaa ka hadlay waxa ay Muqdisho kaga duwantahay dalka intiisa kale, wuxuuna yiri "waa maamulka kaliya ee dalka ka jira ee nidaamkiisa uu wada gaarsiisanyahay degmooyinkiisa oo dhan".
Gobolka Banaadir waxa uu ka koobanyahay 17 degmo, waxaana ku nool dadka ugu badan ee Soomaaliyeed ee magaalo kaliya degen meel ka mid ah Soomaaliya iyo adduunkaba, waxaana lagu qiyaasaa in ay ku noolyihiin wax ka badan labo milyan oo qof.